पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय : निजी क्षेत्रमा हात हाले अख्तियार आफैं फेल खान्छ – अब दैनिक
पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय : निजी क्षेत्रमा हात हाले अख्तियार आफैं फेल खान्छ
‘सबै भ्रष्टाचार मैलेमात्र हेर्छु, मैलेमात्र गर्न सक्छु मसँग मात्र क्षमता छ भन्ने हो भने अख्तियार फेल खान्छ,’ उनले भने।
‘निजी बैंकलाई हेर्ने नियमनकारी निकाय त राष्ट्र बैंक छँदै छ नि,’ उनले भने, ‘सबै कुरा अख्तियारलाई दिने भनेको राष्ट्र बैंकजस्ता अरू नियमनकारी निकायलाई विश्वास नगरेको भयो। यसले तिनलाई पंगु बनाउँछ। अनि निजी क्षेत्रलाई पनि धेरै त्रासमा राख्छ,’ उनले भने।
‘कम्पनी ऐनविरूद्ध काम गरे कानुन लाग्छ, ठगीसम्बन्धी कानुनले नियमन गर्छ, कर तिरेन भने राजश्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गर्छ। त्यसमाथि अवैध सम्पत्ति जोडेर लगानी गरे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अख्तियार लगाउनु पर्दैन।’
‘राज्यले त तिमी कम्पनी खोल, जनतालाई काम लगाऊ, रोजगार देऊ, आर्थिक उन्नति गर, हामी सहुलियत दिन्छौं, तिमीले पनि सक्छौ भने विदेशी लगानी बढाऊ भनिराखेको छ। अर्कोतिर यिनीहरूलाई अख्तियार लगाउने?,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउनु हो। यसरी राम्रो हुँदैन।’
‘निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु भनेको के हो भने देशको आर्थिक विकासमै नकारात्मक असर पर्नु हो। सरकारको लगानी भएको सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने बेग्लै हो। तर निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित भएको संस्थालाई हेर्नु भएन,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुस्: बैंकमा ‘लोकमानकली’को अवस्था देखिन सक्छः पूर्वगभर्नर क्षेत्री
‘निजी क्षेत्र पनि अख्तियारले हेर्न सम्भव छैन। झन् हात हालेर उसले व्यवस्थालाई बिगार्नेमात्र काम गर्छ। अनुसन्धान गर्ने क्षमता नै छैन त्यसमाथि कन्सेप्ट नै गलत छ के,’ पूर्वप्रमख आयुक्त उपाध्यायले भने।
‘सबैतिरको भ्रष्टाचार कम गर्छु भनेर अख्तियारले सक्दैन। यसको काम भनेको भ्रष्टाचारविरूद्ध माहौल सिर्जना गर्ने हो। त्रासको वातावरण बनाउने हो। कुन जिल्लाको कुन वडाको सचिवले खायो भनेर हेर्दै हिँड्नेमात्र होइन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार भएका ठाउँमा तथ्य प्रमाण जुटाउने र अभियोग लगाउने आफ्नै काम राम्ररी गर्न सक्यो भने त्यस्तो माहौल पनि सिर्जना हुन्छ।’
‘अहिले पनि उसले सरकारी बजेट भएका ठाउँमा हेर्न सक्दैन मन्त्रिपरिषद र त्यसका समितिका निर्णयलाई नछुने भो त्यसमा भ्रष्टाचार छ भने हेर्न पर्दैन? जहाँ सरकारको पैसा लाग्या छ। बजेटको पैसा छ त्यसलाई त्यसलाई छुन नपाइने रे! तर अन्त हात बढाउने भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने।